Hlala Isikhashana- Ngaphambili kwechibi elikhulu suka!
Drasco, Arkansas, i-United States
I-indlu eyakhiwe ngamapulangwe ephelele ibungazwe ngu-Angela
Ngaphansi kwezitebhisi kulindelwe amanzi amahle acwebile namawa amahle eGreers Ferry Lake! Vuka ube nombono omuhle ophambi kwechibi ukusuka endaweni enwetshiwe emboziwe. Yehla ngezitebhisi zedwala ukuze ubhukude endaweni ethule noma uyodoba usuka esikhumulweni semikhumbi. Irempu yesikebhe itholakala kumakhilomitha ayi-3 kuphela. Jabulela ukushona kwelanga okumangalisayo, pheka esondweni legesi, phumula kubhavu oshisayo we-jacuzzi noma wenze i-s'mores phezu komgodi womlilo. I-DishNetwork w/ DVR & Wii U iyatholakala.
*IZIVAKASHI EZIPHEZULU KWESI-6 KUMELE ZIBUZE KUQALA
Ikhishi livuselelwe futhi liqokwe kahle ngezinto zikagesi ezingenasici, i-blender, i-crock-pot, amapani okubhaka, i-cutlery, umenzi wekhofi we-keurig nesihlanza samanzi. Amafasitela aphansi kuya kusilingi anikeza ukubukwa okuhle kakhulu noma ungaphakathi endlini. Zigcine ufudumele futhi uthokomele eziko ngobusuku obubandayo. Ngaphandle, uzothola izihlalo eziningi ezinethezekile, i-hammock, imidlalo yangaphandle, kanye ne-gas grill enkulu. Usuku lina? Sinikeza i-Dish Network nge-DVR, i-Wii U kanye nemidlalo eminingi yebhodi lomndeni. Asinayo i-WiFi futhi asiphuthelwa yiyo uma sisechibini☀️
4.98(61 okushiwo abanye)
Ukuba sodwa kanye nemibono enokuthula kusenza sifune "Ukuhlala Isikhashana" njalo uma sivakasha. Enye yezinto esizikhonzile ukwenza nje ukuphumula kuvulandi ongemuva uvakashele, ubukele izilwane zasendle futhi abadobi ngezikhathi ezithile bentanta. Sisanda kwengeza ama-kayak amabili amadoda amabili, kanye ne-lily pad ukuze izivakashi zethu zizisebenzise. Ujabulela igalofu? Letha amaklabhu akho! Ukuhamba ngemizuzu eyisikhombisa kuphela ukusuka eTannenbaum Golf Course.
Umnikazi wendawo, umsingathi usefonini nje engekho. Sifuna ukuqinisekisa ukuthi unokuhlala okujabulisayo nokukhumbulekayo nathi.
Hlola ezinye izinketho ezise- Drasco namaphethelo